July 2012 - पेटबोली ...!
Monthly Archive:: July 2012	Sort Posts by:
नो मोर लभ प्लिज् !!!
पृष्ठभूमि: यो पनि कथाको विषय होला भन्ने सोचेकै थिएन। अनि भर्खरै टुसाउन खोजेको प्रेमका बारेमा त्यो पनि पूर्ण रूपमा चिन्न नसकिएको मान्छेको बारेमा। तर यसलाई कथा नबनाउने हो भने भर्खरै पलाउन शुरू गरेको प्रेमको ठोसा मर्ने पक्का भयो। त्यसैले नफक्रिएको यो प्रेमगाथा लेख्नु पर्ने वाध्यता आइ लाग्यो।	Tweet
हाइवे र सत्य
सामाजिक सञ्जालका धेरै साथीहरू मैले ‘हाइवे’का बारेमा गरेको विज्ञापन पोष्टहरूका बारेमा मलाई गाली गरेर अनि ‘हाइवे’को ओभर हाइप भएको भनेर गुनासो र गाली गर्ने गर्छन्। फेसबुक नामको अगाडि ‘हाइवे’ थपेको विषयमा धेरै साथीहरूले अनलाइनमा आफ्नो परिचय नै बेचेको समेत आरोप लगाएका छन्। मेरो जवाफ सिधा छ-, जसरी	Tweet
मोबाइल र पत्रकारिता
“सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवलाई फोन गरें। उनले तुरून्तै फोन ‘कट’ गरे। मैंले लगातार ११ पटक फोन गरें, उनले एघारै पटक फोन काटे। त्यसपछि मैंले उनलाई ‘टेक्स्ट’ गरें,- मन्त्री ज्यू तपाईंको फोनमा ‘रिसिभ’ बटन छैन?” एकजना मोफसलका पत्रकार (जो आफूले नेपालको पत्रकारिता धानेको दाबी गरूँला झैं गर्दैथिए) ले	सामाजिक सन्जाल	अनन्त कोइराला